नयाँ शक्ति पार्टीका एकमात्र प्रदेश सांसद र गाउँपालीका अध्यक्ष कांग्रेस प्रवेश गर्ने तयारीमा – www.agnijwala.com
नयाँ शक्ति पार्टीको प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत रसुवाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद प्रेम तामाङ र रसुवाको आमाछोदिन्ग्मो गाउँपलिका प्रमुख बुचुङ तामाङसहित नयाँ शक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ता कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेका छन ।
नेपाली काँग्रेस रसुवाले सार्वजनिक गरेकाे निमन्त्रणा पत्रमा नयाँ शक्ति का एकमात्र प्रदेश सांसद र गाउँपालीका अध्यक्ष सहित पार्टी नै कांग्रेसमा विलय हुन लागेकाे जानकारी दिईएकाे छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, केन्द्रीय सदस्य गगन थापा सहितका नेताहरुको सांसद तामाङसहितको टोलीलाई पार्टी प्रवेश गराउने छन् ।
फागुन १३ गते रसुवाको कालिका स्थानमा नेपाली काँग्रेसले आयोजना गर्न लागेको विशेष कार्यक्रममा उनीहरु पार्टी प्रवेश गर्न लागेको स्रोतले बतायो ।
रसुवाबाट नयाँ शक्तिका सबै नेताहरु कांग्रेस प्रवेश गर्ने भएपछि अहिले पार्टीलाई सम्पर्क व्यक्ति भेट्नसमेत कठिन भएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सांसदसहितका नयाँ शक्तिका नेताहरुले डा. भट्टराईलाई आफूहरु पार्टीमा नभएको जानकारी गराइसकेका छन् ।
यता नयाँ शक्ति रसुवाले भने तामाङ लगायतलाई निस्कासन गरेकाे दाबी गरेकाे छ ।